सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आवेदन कसरी भर्ने? (भिडिओ) - Nepali in Australia
July 30, 2021 July 30, 2021 autherLeaveaComment on सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आवेदन कसरी भर्ने? (भिडिओ)
सवारी साधन ट्र्याकिङ र सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली सुरू गरेको थियो। जसअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनेको थियो। तोकिएको मिति सकिए पनि काम अझै पूरा भएको छैन। साउन १ गतेदेखि सरकारले सबै प्रकारका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेको थियो। तर यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार प्राविधिक समस्याका कारण काम योजनाअनुसार अघि नबढेको हो। यद्यपि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेको संख्या बढेको छ। ‘हालसम्म बीस हजार सवारीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्। जसमध्ये सरकारी र निजी सवारी पर्छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीमा भने प्लेट वितरणको कामै सुरू भएको छैन।’
सुरक्षाको हिसाबबाहेक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेसँगै यातायात व्यवस्थापनमा एक किसिमको सिस्टम बस्ने उनको भनाइ छ। हामीकहाँ तीन प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुन्छन्- सरकारी सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको, निजी साधनमा सेतोमा कालोले लेखिएको र सार्वजनिकमा पहेँलोमा कालोले लेखिएको।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभिन्न केन्द्र तोकेको छ। दुई पा‌ंग्रे सवारीमा गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), साना तथा मझौला चार पा‌ंग्रे सवारीमा टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालय र ठूला सवारीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट जडान गरिन्छ। त्यस्तै सरकारी सवारीमा भने यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवनबाट काम हुन्छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि केन्द्रमा जानुअघि अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। आवेदन दिनुअगाडि सवारीको सम्पूर्ण राजश्व चुक्ता भएको हुनु पर्नेछ। राजश्व चुक्ता गरेपछि विभागको वेबसाइट मा जाने। वेबसाइटको गृहपृष्ठ खुलेपछि त्यसको दायाँपट्टी विभिन्न विकल्प देख्न सकिन्छ। त्यसमध्ये दोस्रो विकल्प ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली’ भन्नेमा जाने।
यसभित्र पनि केही विकल्प हुन्छन्। ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्ने तरिका’ भन्ने विकल्पमार्फत नयाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन गर्नुपर्ने प्रक्रिया बुझ्न सकिन्छ। ‘पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा फाराम भर्ने तरिका’ भन्ने विकल्पबाट आफ्नो नयाँ सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन अनलाइनबाटै गर्न सकिने पूरा प्रक्रिया बुझ्न सकिन्छ।
यीबाहेक अन्तिममा ‘अनलाइन आ
ड्राइभिङ लाइसेन्सको तयारीमा हुनुहुन्छ? परीक्षाको ढाँचा अव यस्तो हुँदैछ
पृथ्वीराजमार्गको जवाङ्खोलामा पहिरोमा पाँचवटा गाडी पु’रिए, दुईको मृ’त्यु
July 3, 2021 auther